काठमाडौँ । सर्पलाई सर्पले निलेको कहिल्यै देख्नु भएको छ ? यस्तै घटना घटेको छ तारकेश्वर नगरपालिकाको काभ्रस्थलीमा ।
पत्याउनै गाह्रो ! गोरुले दुध दिन थालेपछि...लौ हेर्नुहोस् भिडियो
हेलम्बु । भनाई नै छ — गोरु ब्याउँदैने, दुध पनि दिँदैन ।
कुन पहिला आयोः कुखुरो कि अण्डा ?
एजेन्सी । कुखुरी पहिला आयो कि अण्डा रु यो प्रश्न मानिसहरुबिच जहिले पनि विवादमा रहेको थियो । तर, यसको ठोस उत्तर भने कोहीसँग पनि रहेको थिएन । तर, अब वैज्ञानिकहरुले दाबी गर्दै भनेका छन्,‘संसारमा कुखुरी नै पहिला आएको थियो ।’